Umongameli wangaphambili wase-Afghanistan uhlala e-UAE nge- $ 169 yezigidi zeemali ezibiweyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » Umongameli wangaphambili wase-Afghanistan uhlala e-UAE nge- $ 169 yezigidi zeemali ezibiweyo
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba ezahlukeneyo
Icandelo loMphathiswa Wezangaphandle kunye nokuBambisana kwamazwe e-UAE linokuqinisekisa ukuba i-UAE yamkele uMongameli u-Ashraf Ghani kunye nosapho lwakhe kweli lizwe ngezizathu zokunceda abantu.
Umongameli okhutshiweyo wase-Afghanistan uvela kwi-UAE.
U-Ashraf Ghani utyholwa ngokuphanga i-169 yezigidi zeedola kwi-Afghanistan.
I-UAE "yamkele" uGhani kunye nosapho "ngezizathu zokunceda".
Umphathiswa Wezangaphandle wase-United Arab Emirates ukhuphe ingxelo namhlanje ebhengeza ukuba ilizwe lithathe owayesakuba ngumongameli wase-Afghanistan u-Ashraf Ghani kunye nosapho "ngezizathu zoncedo" emva kokuba umongameli owayegxothiwe abaleke e-Afghanistan ngeCawa ngethuba amaTaliban esiya eKabul.
U-Ashraf Ghani kunye nosapho lwakhe bahlala ngoku Abu DhabiIkomkhulu le-UAE.
"I-UAE yoMphathiswa Wezangaphandle kunye Nentsebenziswano Yamazwe Angangqina ukuba i-UAE yamkele uMongameli u-Ashraf Ghani kunye nosapho lwakhe kweli lizwe ngezizathu zoncedo," ingxelo emfutshane, eposwe kwiwebhusayithi ye-UAE yoMphathiswa Wezangaphandle ifundwe ngokupheleleyo.
UGhani wabaleka Afghanistani iiyure ezininzi ngaphambi kokuba intshukumo yeTaliban radical ingene eKabul ngaphandle kokudibana nayo nayiphi na inkcaso.
Akucaci ukuba yeyiphi indlela ahamba ngayo ukuya e-UAE okanye xa wafika apho. Kwangoko, iindaba zeKabul zathi wema eOman, apho wafika evela eTajikistan. Iphephandaba i-Hasht-e Subh Daily lithe uGhani ungene e-Oman evela e-Uzbekistan.
Ushiye ikomkhulu lase-Afghanistan ehamba nenkosikazi yakhe uRula Ghani kunye nabanye abantu ababini, ekuthiwa uthatha i-169,000,000 yeedola yemali ebiwe kunye naye. Ngokwe-Ofisi yoZakuzo yase-Russia e-Kabul, uGhani wazama ukuphuma kunye nemali eninzi kangangokuba ayinakulunga kwihelikopta yakhe kwaye abanye kuye kwafuneka balahliwe kwisikhululo seenqwelomoya.
Ummeli wase-Afghanistan e-Tajikistan u-Muhammad Zohir Agbar uthe uMongameli wase-Afghanistan u-Ashraf Ghani ubalekile kweli lizwe, ephethe i-169 yezigidi zeedola kwi-ofisi kanondyebo.
Unozakuzaku ukubize ukubaleka kuka-Mongameli wase-Afghanistan "kukungcatsha urhulumente kunye nesizwe" kwaye wongeze ukuba uGhani ebe i-169 yezigidi zeedola kwizemali.
Ngokwenxusa, uzakubhena kwi-Interpol ngesicelo sokubamba u-Ashraf Ghani kwaye amzise kwinkundla yamazwe aphesheya.
Amanye amagosa akwizikhundla eziphezulu kunye nabapolitiki balandela uGhani xa eshiya ilizwe, phakathi kwabo, uMarshal Abdul-Rashid Dostum, kunye no-Atta Muhammed Nur, abathi ngaphambili babhengeza imfazwe kwiTaliban kwiphondo lase Balkh, owayesakuba ngusekela mphathi we-National Security Council Serur U-Ahmad Durrani, owayesakuba ngu-Mphathiswa Wezomkhosi u-Bismillah Mohammadi kunye nomphathi wamajoni ephondo lase-Herat u-Mohammad Ismail Khan.
USteven Malarski uthi:
Agasti 18, 2021 kwi-16: 16
Akukho nto itshintshayo. Yintoni ebeya kuyilindela !!